Farmaajo oo Xaaladiisa Caafimaad ay Xumaatay iyo safar dibadda oo uu dhawaan U baxayo | Xaqiiqonews
Farmaajo oo Xaaladiisa Caafimaad ay Xumaatay iyo safar dibadda oo uu dhawaan U baxayo
Xubno lagu kalsoon yahay oo ka tirsan Villa Somalia ayaa sheegay in dhawaan madaxweynaha Soomaaliya uu dhawaan dalka dibadiisa uu ku aadi doono baaritaan caafimaad Islamarkaana uu soo qaadan nasiino mudo todobaad ah.
Maxamed c/llahi farmaajo Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maalmahaan waxaa la soo gudboonaaday xanuuno badan kuwaas oo la aaminsan yahay in ay ka dhasheen daal iyo doodo kulul uu kusoo jiray tan iyo olalihii doorashadiisa.
Madaxweynaha ayaa la sheegay waxa ugu weyn ee heesta in ay tahay hurdo la’aan iyo daaal farabadan waxaana habeen iyo maalin xafiiskiisa uu qaabilayaa tan iyo markii la doortay hogaamiyaal muran qaba iyo murashaxiin xil raadis ah.
Shalay ayaa Madaxweynaha xanuun maalmahaan la yareysanaayay dareemay isagoo ku guda jira booqosho uu ku joogay Xarunta Jaamacadii Umadda ee Gaheyr.
Wariyaal iyo saraakiil ayaa sheegay in Madaxweynaha uu ku dhax hurday Xarunta Jaamaacdda Gahayr waqti kooban uu helay meel uu fariisto oo madaxda loo diyaariyay.
Waxaan shaki ku jirin uu daal farabadan dareemayo Madaxweynaha Soomaaliya oo aan qaadan waqti nasiino ah ilaa markii uu soo bilaabay olalahiisa doorashada kadib guushiisana uu wajahay Mowjado siyaasadeed.
Xanuun dhinaca madaxa ah iyo jir xanuun iyo daal ayuuna hada la daalaa dhacaya madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed c/llahi farmaajo.
Xubnaha aan xogtaan ka helnay ayaa sheegay in Madaxweynaha uu safarkiisa baaritaanka iyo nasiinada uu ku tagi doono Dalka Turkiga markii uu dib usoo laabta Madaxweynaha turkiga oo hada ku sugan Dalka Sacuudiga.
Warar kale ayaa sheegaya in Madaxweynaha uu caafimaadkiisa ku Tagi doono Imaaraad balse waxa ay Ilaha aan wararka ka helnay isku raacsan yihiin Madaxweynaha uu dhawaan Caafimaad iyo Nasiino dibada ah aadi doono isagoo soo maqnaan doona mudo todobaad ah.